MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 869
>Min Ko Naing's birthday
>Khaing Mar Kyaw Zaw - Blood Sisters
>Gyaw Dee - ASEAN's next black sheep
>Tint Lwin – Using Lable in GMail
> ဂျီမေးလ် မှာ ဖိုလ်ဒါတွေခွဲရအောင် တင့်လွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ နေ့စဉ် မေးလ်စောင်ရေ ဆယ်ဂဏန်းထက်မနည်း ၀င်လာတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ၀င်လာတဲ့ မေးလ်တွေကို သူ့ဖိုလ်ဒါနဲ့သူ မခွဲထားနိုင်ဘူး ဆိုရင်တပတ်လောက်ကြာတဲ့ အခါ...
>Maung Aw – Letter to the Generals
> ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ မောင်သြ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ လေးစားရပါသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများခင်ဗျား … ယနေ့ဆိုလျင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ခဲ့ပါပြီ။ န၀တ...
>Cartoon Maung Yit – Unitity is Strenght for Tatmadaw not for the opposition !!!
> Cartoon Maung Yit – Unitity is Strenght for Tatmadaw not for the opposition !!! February 19th, 2009 No...
>Aung Thar Nge – Web Surf Security
> ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေး အောင်သာငယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပို့စ် ၂ ခုကို ဖတ်ပြီးတော့ သယ်ရင်းတွေလည်း အတော် စိတ်ညစ် သွားကြပုံ ရပါတယ်။...
>Mann Win Maung – Ludu U Hla according to me
> ကျနော်သိသော လူထုဦးလှမန်းဝင်းမောင်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝဝ၉ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အပေါင်း အပါများ ကျဆုံးပြီးနောက်တွင် ကျနော်သည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ဝင်ရောက် တာဝန်...
>BBC Journalism College launched
> သတင်းရေးနည်း ဘီဘီစီအင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် လေ့လာနိုင်ပြီ မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် သတင်းလိုက်နည်း၊ သတင်းရေးနည်းပညာများကို လေ့လာနိုင်ရန် တနင်္လာနေ့မှစ၍ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြလိုက်သည်ကို...
>16th Feb 2009 – Sunday Weekly Radio
> ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ မြစ်ကြီးဧရာဝတီ တေးသီချင်းများ စုစည်းမှု သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ၂၀၀ရ အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ မြင်ကွင်း စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ဖို့ မဲခွဲသတဲ့လား – ခေတ်ပြိုင်အာဘော် မျက်မှောက်ရေးရာ...
> မြန်မာပြည် နှင့် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးနိုင်ငံတခု သံအဆက်အသွယ် ပြုလုပ် ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ ဆဋ္ဌမမြောက် အသေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် Andorra နိုင်ငံနှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်လိုက်သည်ဟု တနင်္ဂနွေနေ့ထုတ်...
>May Nyane – Thee Lay Thee in Mary Land
> သီးလေးသီးနဲ့ မေရီလင်းပြည် မေငြိမ်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ သီးလေးသီးအဖွဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတခွင် လှည့်ပြီးဖျော်ဖြေဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ထွက်သွားပြီလို့ သတင်းကြားချိန်မှာ ကျမကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံဇင်းမယ်မြို့မှာပဲ ရှိနေတာပါ။ သီးလေးသီးနဲ့ ကျမ ၂၀၀၇ခုနှစ်...
>Book Worm The Geek –3Burmese E-Books on MoeMaKa Shelf
> အင်တာနက်ပေါ်က ဖတ်စရာ အီးဘုတ်အုပ် အသစ် ၃ ခု စာဂျပိုး သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ ၈၈ မျိူးဆက်ကျောင်းသား ကိုအောင်ထွန်း ပြုစုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း (၁၉၀၃ –...
>Burma Bans Crocodile Export
> မိကျောင်းများ ပြည်ပပို့ခွင့်မပြုXinhua သတင်းဌာနဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ကင်မရာကို ပြုံးပြနေသော သာကေတ မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းမှ မိကျောင်းတကောင် မြန်မာအစိုးရက မိကျောင်းမျိုးသုန်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားသည်ည်ဟု...
>OWay Myo – The Last Defense – Poem
> နောက်ဆုံး ခံတပ် အိုးဝေမျိုး (ပုရစ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ တတိယမီးကျည် ပစ်တော့မယ် သူငယ်ချင်း … ငါ ရောက်ခဲ့တယ်လေ … တကယ်တော့ အခန့်မသင့်ရင် ကျွံကျ သွားနိုင်တဲ့...
>Mar Mar Aye 264
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၄) ၁၆ ကြိုးတပ် စောင်းမာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၉ “ – – ရှေးက လက်ကျန် ဂီတ မိခင်ဖခင်တွေ ဆုံတတ်ကြတဲ့ ‘ဆိုတီးစားပြန်’...
>sport news on Feb 15
> ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ အားကစားသတင်း ဝင်းလက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၉ မိုက်ကယ်ဖေးကို ပြောင်လှောင်နေကြသော လူရွှင်တော်နှစ်ဦး မိုက်ကယ်ဖေး တရုတ်နိုင်ငံအား တောင်းပန်စကားဆိုအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်များပိုင်ရှင် ရေကူးချန်ပီယံ မိုက်ကယ်ဖေးသည် မိမိ၏အပြုအမူအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား အနူးညွှတ်...
>Than Soe Hlaing – Rohingya, Regional Dispute and Burma
> ရိုဟင်ဂျာ အရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာ ရောဂါ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သန်းစိုးလှိုင် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၉ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ၅ နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်န၀ါရီလက စတင်လိုက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဟာ...
>Thit Kaung Ein – Let’s talk tomorrow
> နောက်နေ့ကျမှ ဆက်ပြောကြရအောင် သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ တသက်လုံး ချိုးထောင်၊ ခါနှိုက် လုပ်လာတဲ့ကောင် စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့နေ့မှာ ငှက်လွှတ်မယ်။ အရုဏ်ဦးမှာ ချစ်စွာသော ကြာပန်းရနံတို့ဖြင့် မွှေးပျံစွာ ဘုရားပန်းတင်မယ့် လက်များ...
>Win Paw Maung – Saw Wai Day
> စောဝေနေ့ ၀င်းပေါ်မောင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ မောင် … မနက်ဖြန် `ချစ်သူများနေ့´နော် အမှတ်တရ ဘာပေးမှာလဲ ပြော ညနေကျရင် အပြင်မှာ တခုခုသွားစားမယ်နော် … ဟင်… မဟုတ်ပါဘူး...
>San Min’s solo show in Chaing Mai
> စံမင်း၏ လက်နက်ပြပွဲဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ပြပွဲတွင် တွေ့ရသော ပန်းချီစံမင်း ပန်းချီစံမင်း၏ တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲကို ယနေ့ညနေပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ သုဝဏ္ဏဘူမိပန်းချီပြခန်းတွင် စတင်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု...
>U.N. envoy visiting Insein prison
> ကုလသမဂ္ဂအရာရှိ အင်းစိန်ထောင်သို့ သွားမည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ချက်ချင်းလွတ်ပေးရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲမှ မြန်မာကလေးငယ်တဦး။ (Photo:AP)...
>Students Movement in Burma (05)
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (အပိုင်း ၅)‘၁၉၃၈ တတိယ တက္ကသိုလ် သပိတ် ၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံ’အောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ၁၉၃၆ တက္ကသိုလ် ဒုတိယ သပိတ်ကြီး အပြီးမှာတော့ နဂိုမူလ...
> ချစ်သူများနေ့ကို နိုင်ငံတကာတွင် ကျင်းပ ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ကို ချစ်သူများနေ့ (Valentine’s Day) အဖြစ် နိုင်ငံတကာတွင် သတ်မှတ် ဆင်နွဲနေကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ...
>a burmese young man with pierced lip
> သတ္တုကွင်းတပ်ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာလူငယ်များထံတွင်လည်း တွေ့ရဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဖောက်ပြီး သတ္တုကွင်းတပ်ထားသော ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာပြည်သား လူငယ်တဦး။ သူနှစ်သက်သော အမေရိကန် ခေတ်ပေါ်တေးဂီတ ပညာရှင်တဦး၏ ပုံစံအတိုင်း နှုတ်ခမ်းဖောက်ပြီး အလှဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ...
> ဦးသန့် ရာပြည့် (တံဆိပ်ခေါင်းများ) ဦးအုန်းကျော်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ “ဒို့ ဗမာနိုင်ငံသား – ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့် အတွက် နှစ်တရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်တဲ့...
> မြန်မာပြည်၏ နောက်ဆုံး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၄ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးဖိတ်စာတွင် ဆဋ္ဌသံဂါယနာ ပဓာန သာသနာ့ ဒါယကာကြီး ဟု ဖော်ပြထား မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃...
Page 869 of 938«1...867868869870871...938»